Ajajaa WBO Zoonii Lixaa: ‘Qabsoo nagaatti deebi’uuf qabxiiwwan ijoo dhugaatti guutamuu qaban jiru’ – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooAjajaa WBO Zoonii Lixaa: ‘Qabsoo nagaatti deebi’uuf qabxiiwwan ijoo dhugaatti guutamuu qaban jiru’
Ajajaa WBO Zoonii Lixaa: ‘Qabsoo nagaatti deebi’uuf qabxiiwwan ijoo dhugaatti guutamuu qaban jiru’
UURAAN MARSAALEE HAWAASAA IRRAA FUDHATAME
Marroo/ Kumsaa Dirribaa ajajaa WBO Zoonii Lixaa kan hidhannootti jiran.
Lixni Oromiyaa erga bulchiinsa Komaand Postii jala galtee amma waggaa tokkoof deema. Naannichatti yeroo garaagaraatti ajjeechaan namoota nagaa irratti yeroo raawwatus ni himama.
Ajjeechaa kanaaf ammoo mootummaan qaama hidhatee naannicha keessa socho’u waraana ABO duraanii himata.
Jiraattotni BBC’n dubbisaa ture ammoo rasaasa lamaan du’aa jirra jechuun yeroo garaagaraa komatu.
Gama mootummaan waraana ABO duraanii ammoo hidhatanii jiran deeggartan jedhamuun, gama biraan ammoo mootummaa deeggartan jedhamuun gidduutti akka miidhamaa jiran himu.
Ajjeechaan dhiyeenya kana Wallagga Lixaatti I/G komunikeeshinii abbaa Taayitaa Daandiiiwwan Oromiyaa Obbo Tolaa Gadaa, magaalaa Naqamteetti I/G Qorannoo yakkaa Komaander Caalaa Dagaagaafi akkasumas Shawaa Lixaa aanaa Jalduutti qondaaltota aanichaa lama irratti raawwates ni eeramu.
Ajjeechaa namoota nagaafi qondaaltota mootummaa irratti raawwatama jedhamu kanaaf mootummaafi waraanni ABO duraanii hidhatee jiru quba walitti qabuurra kan darbe addatti waanti beekamu hin jiru.
Hunda caalaa barataan barumsa isaa, qonnaan bulaan qonnaa isaa, daldalaan daldala isaa, hojjetaan waajiraa ammoo hojii waajiraa isaa guutuufi guutummaatti nagaan bobba’ee galuun jiruu ofii gaggeeffachuun, ummatichaaf yaaddoo ta’uu jiraattotni kanaan dura BBC’n dubbisaa ture himaa turan.
Oduuwwan kana waliin walitti dhiyaatan biroo kanneen keessaa dubbifadhaa:
Ajjeechaa qondaaltota motummaatii maaltu furmaata?
Dabalataan yaada isaanii bilisaan dubbachuufillee sodaa akka qaban himaa turan.
Waraana mootuummanis waraana hidhatee jiru kan WBOnis akka ajjeechaan raawwatutu himama.
Gaaddisa Paartilee Oromoo
Ajjeechaa qondaaltota mootummaa Lixa Oromiyaatti torban lamaan dura raawwatameen walqabsiisuun BBC’n Itti-aanaan Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Dheeressaa Tarrafaatiin nagaa uumuudhaaf maaltu ta’uu mala jechuun gaafatee ture.
Aanga’aan kunis Gaaddisa Hooggansa Oromoo dhaabbate jalatti rakkoo akkasii kana furuudhaaf waliin hojjechuuf sochiirra akka jiran himan.
Gaaddisni Paartilee Oromoo kunis rakkoolee paartilee Oromoo gidduu jiran hiikuuf marii ji’a jahaaf gaggeefmaa tureen booda akka hundaa’e ibsamee ture.
Rakoo paartilee Oromoo ilaallatanis gaadisicha jalatti hiikuuf walii galanii, koreefi adeemsa ittiin hojjetanis ibsatanii turan.
Guyyaa hundeeffamichaa walitti qabaa korichaa kan tahan Obbo Lammaa Magarsaa ijoollee keenya bosonatti haftan waliinis karaa nagaa fixachuu dandeenya jechuun dubbatanii ture.
Haata’u malee erga Gaaddisa kana jalatti rakkoo jiru furuun nagaan hundaaf akka bu’uu taasisna jedhamees ajjeechaan hin dhaabbanne.
Rakkoo ajjeechaa qodaalota mootummaa irra deddeebiyuun mul’atus akka dhaabbatuuf hojjechaa jirra kan jedhan Obbo dheeressaan: ”Qaamoleen dhuguma ummata Oromoof qabsoofna jedhan karaa nagaafi nagaan akka dorgomanidha fedhiin mootummaa,” jedhu.
“Wal-hubachuu dhaabuurraan malee Oromoon Oromoo ajjeesee waan fayyadamu hin qabu, kasaaraadha jechuun,” dubbatu Obbo Dheeressaan.
Akka mootummaatti ajjeechaa kana eenyutu raawwata jettu gaaffii jedhuuf: “Qaamni hidhatee socho’u hanga jiruttii gamaafi gamanatti qabachuun ni jira,” jedhan.
Gamaafi gamanatti walitti qabachuun kun yoom dhaabbataree?
Akka Obbo Dheeressaan: “Walumaagalatti nuti akka mootummaatti meeshaan nu hin barabaachisu ejjennoo jedhu qabna,” jedhan.
Dabalataanis, lafa nageenyi hin jirreefi qaamni hidhatee socho’u kanatu, sanatu raawwate jechuun dimshaashessuun hin tahu.
Inni guddaan qabsoo hidhannoo dhaabuu, meeshaa seeraan alaa to’achuufi olaantummaa seeraa mirkaneessudha jechuun fala waara’aadha kan jedhan dubbatu.
Gaaddisa Hooggansa Oromoos ta’e mootummaan karaa mariifi nagaan rakkoo kana furuudhaaf fedhiin erga jiraatee akkamiin gara qabatamaatti ce’uu mala? Quba walitti qabuun kun ammoo akkamiin dhaabbachuu qaba?
Dhimma kana irratti ajajaa waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Lixaa Marroo ykn Kumsaa Dirribaa dubbisneerra.
Uummatni naannichaa gam-lamaan, rasaasa lamaan du’aa jirra jedhu; waraana mootuummaafi waraana keessaniin miidhamaa akka jiran himatu; Uummata nagaa irratti maaliif ajjeechaa raawwattu gaaffii jedhan Marroof BBCn dhiyeesse.
WBO’n ummata nagaa qonnaan bulaas tahu barataa bakka kamittuu ajjeesera jedhee uummatni yoo himate itti gaafatamummaa isaa ni fudhanna, ajjeeses hin beeku jechuun deebisan.
‘Wallaansi WBO’f taasifame kan summiitii malee kan faalama baakteeriyaa miti’
Xiyyeeffannoon isaanii waraana mootummaa hidhatee socho’u irratti ta’uu himuun: “WBO roorrootu manaa isa baase. Roorroo sabaaf bahee ammoo deebisee saba isaa hin ajjeesu,” jedhu.
Wallagga Lixaatti aanga’aa mootummaa Obbo Tolaa Gadaa jedhaman hidhattotni akka ajjeesan mootummaan ibseera. Qondaaltonni mootummaa hojiif yeroo socho’an maaliif ajjeechaa raawwattu gaaffii jedhufis deebii kennaniiru Ajajaan WBO Zoonii Lixaa Marroon.
“Namoota ummata tajaajiluuf bahan kam iyyuu hin ajjeesnu. Ajjeechaa Tolaa jedhamuu ilaalchisee waraana mootummaan marfamee osoo deemanii akkamiin isa qofaa adda baasuun ajjeesan jedhanii gaafachuun gaariidha.”
Akka mootummaan maxxansetti konkolaataa afuriin deemaa turan. Inni ammoo isa gidduu keessa ture jedha. Akkamitti Namoota jiran hunda keessaa isa irratti qofa xiyyeeffate jechuun bifa gaaffiin ibsu Marroon.
“Namoota mootummaan qacaramuun hawwaasa tajaajilan kamiyyuu waraanni keenya hin ajjeesu.”
Namoonni hedduun naannoo nuyi socho’aa jirru keessaa bahanii hojjetanii galaa jiru kan jedhu Ajajaan kun, isaan irratti maaliif ajjeechaa hin raawwanne silaa jechuun ammas bifa gaaffiin, gaaffii deebisa.
“WBO alatti wanta WBO fakkaatu mootummaan bobbaseerus waan jiruuf rakkoo hedduutu jira,” jedha.
Marroon waraanni isaanii uummatta keessa akka socho’u himuun mootummaan yeroo gabaabduu keessatti ummata keessaan baasa jedhee yaaduun yoo ummaticha fixuu tahe malee abjuudhaa jedhe.
Gaaffii BBC’n dhaabni isaanii duraanii ABO’n Boordii Filannoo irraa waraqaa beekamtii fudhachuun mootummaa irraa amantaa akka qabaatan ibsuu hordofee ejjennoo keessan irratti wanta jijjire qabaa jedhee gaafateef Marroon deebii kennu hin qabu jechuun bira darbe.
Karaa Gaaddisa Paartilee Oromoo kana waamichi osoo isiniif godhame gara qabsoo nagaatti deebi’uuf qophii qabduu kan jedhuu ammoo akkas jedhan.
“Yoo daandiin araaraa dhugaa jiraate, jaarrolee mootummaanis nuyis irratti waliigallu filachuu qabna.
Kan mootummaan dabballee ofii bobbaasatu miti. Sun nuuf hin tahu. Kanaan duras irratti walii hin galle,” jedhu.
Inni lammaffaan, labsii yeroo muddamaa mootummaan ummata irratti labsee jiru ka’uu qaba kan jedhu Marroon,
bakki itti wal argamus murtaa’uu qaba. “Kun ammoo nageenya lamaan keenyaaf murteessaadha.”
Itti-dabaluun maqaa WBO dhaan namoota hedduun hidhamanii waan jiraniif hiikamuu akka qaban ibsuun, akka dubbiin kun tasuma irra deebiin hin kaane qaama sadaffaan gidduu keenya jiraachuun barbaachisaadha jedha.
Mootummaan kana kan raawwatu yoo tahe waraanni keenyas dhukaasa dhaabuun mari’achuu dandeenya jedhe Marroon.
Abbootii Gadaa, jaarsolii biyyaafi namootni siyaasaas waraana hidhatee jiru gara qabsoo nagaatti deebisna jechuun waamicha taasisaa turan.
Haatahu malee, maaliif yeroo sana milkaa’uu dhabe kan jedhu irratti Marroon jaarsoliin biyyaa dhufanii nu bira gahanii waliin mari’annee deebi’an jiru jedhe.
Isaan waliin mootummaa irraa maal barbaanna? Maaltus guutamuu qaba kan jedhuufi akkamiin waldhabdee jiru hiikuu dandeenya kan jedhu irratti waliin dubbannee deebi’an jedha.
Garee biraan ammoo osoo dhufanii nu bira hin gahiin reebamne, saamamne jedhaatii deebi’aa jedhamuun, akkasitti deebi’an jedhe.
Jaarroleen nu waliin mari’atan deemanii mootummaaf gabaasa akka godhaniifi uummataaf ibsan waliigallus ergasii akka dhorkaman dhageenye jedhe Marroon.
Mootummaan karaa nagaa mari’achuuf maaliif sodaata? jechuun gaafata Marroon.
Jaarsolii waraana kana waliin mari’atan keessaa manguddoo BBC’n dubbise tokko nageenyumaan marii milkaa’aa gaggeesinee kabajaan galle jedhanii ture.
Koreen teeknikaa karaa araaraa osoo hin taane karaa dhoksaati waraana deebisuuf kan yaalan kan jedhu Marroon, osoo karaa nagaa akkuma eegalame itti fufeera tahe nagaan bu’uu danda’a ture jedha.
Miseensotni WBO waamicha koree teeknikaa yeroo sana hundaa’een deebi’an leenjii haaromsaa galuun gariin gara Poolisii Oromiyaatti makamuu himamaa ture.
Deebii Ajajaan WBO Zoonii Lixaa Waa’ee Hookkara Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaa Irratti Kennan ﻿…